Bogga ugu weyn Sida iyo halka laga helo dalabka lacagta
Haddii aad internetka ka raadiso "halka laga helo dalabka lacagta", waxa laga yaabaa inaad la kulanto dhawr hay'adood oo maaliyadeed, bangiyada khadka tooska ah dhufto ee, iyo laga yaabaa in dhowr albaab lacag bixinta laakiin kuwaas ka mid ah oo run ahaantii bixiya amarada Money?
Dabcan, qof kastaa wuxuu rabaa hab sahlan oo wax walba looga baxo. Nolol sahlan, hab sahlan oo lacag-bixineed, iyo socodsiinta ganacsiyadaada iyada oo aan wax dhib ah lahayn. Bal qiyaas in aanad qaadan lacag caddaan ah.
Haddii aad u baahan tahay inaad bixiso biil ama shakhsi laakiin aadan rabin inaad qaadato lacag caddaan ah ama isticmaal jeeg bangi ama credit card, dalabka lacagta ayaa ah betka ugu fiican. Dukumeentigan xaashida ah wuxuu farayaa bangiga inuu bixiyo lacag gaar ah. Qabow sax?
Ma is waydiisay waa maxay dalabka lacagta? Ma rabtaa in aad hesho dalab lacageed laakiin ma haysatid meel iyo sidee?
Kahor dhamaadka maqaalkan, kaliya ma yeelan doontid aqoon buuxda oo ku saabsan waxa dalabka lacagtu yahay, waxaad sidoo kale baran doontaa sida iyo meesha laga helo dalabka lacagta.
Maxaad ugu baahan tahay dalabka lacagta?
Xagee ka heli kartaa dalabka lacagta?
Bangiyada ama Ururka Deynta.
Goobaha Western Union ama MoneyGram.
Sida loo isticmaalo dalabka lacagta?
Waxa aad u baahan tahay si aad u buuxiso dalabka lacagta
FAQ ku saabsan halka laga helo dalabka lacagta
Immisa ayay ku kacaysaa dalabka lacagta?
Farqiga udhaxeeya dalabka lacagta iyo jeegaga khasnajiga
Muddo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa in amar lacageed la caddeeyo?
Waa kee jeeg khasnaji oo ammaan ah ama amarka lacagta?
Amarada lacagtu ma ammaan yihiin?
Ma la diidi karaa dalabka lacagta?
Dalabka lacagtu miyay dhacayaan?
Sideed u burin kartaa dalabka lacagta?
A money order waa dukumeenti warqad ah, oo la mid ah jeeg, loo isticmaalo lacag-bixin ahaan. Waxaad ku iibsanaysaa dalabka lacagta adigoo siinaya lacag caddaan ah ama lacag kale oo dammaanad ah oo la siinayo khasnajiye, oo lagu daray khidmad adeegga.
Waxay daabacaan dalabka, buuxiyaan xoogaa macluumaad ah, oo u soo diraan ama siiyaan cid kasta oo aad ganacsi la leedahay.
Waa hab lagu bixiyo wax lacag caddaan ah iyadoo la isticmaalayo jeeg qolo saddexaad. Adiga ayaa bixinaya lacagta dalbashada, dhinaca saddexaadna waxay ku soo saarayaan jeeg aad qof u diri karto.
Qofkani waxa uu ku shubaa dalabka lacagta akoonkiisa bangiga ama waxa uu ku bedelaa lacag caddaan ah goobta ganacsiga ama boostada.
Halkaa marka ay marayso, waxa laga yaabaa in aad ku fikirayso- "laakin dabcan, waxaa jira habab kale oo badan oo tan loo bedeli karo". Waxaa jira waxyaabo kale. Laakiin dhowr sababood oo ay tahay inaad ka fikirto isticmaalka money order waa-
Waa bedel ka badbaado badan oo lacag caddaan ah: A money order waxa la samayn karaa oo la bixin karo qof ama urur gaar ah, taas oo yaraynaysa khatarta xatooyada. Haddii dalabka lacageed uu lumo ama la xado, waad burin kartaa oo waxaad heli kartaa beddelka. Haddii aad lumiso lacag caddaan ah, waxbaa kuu hagaagay, soo dirida lacagta caddaanka ahina aad bay khatar u tahay.
Looma baahna akoon bangi Haddi aanad lahayn akoon bangi ama aanad doonayn in aad isticmaasho, money order ayaa faa'iido u leh samaynta lacag bixinta. Uma baahnid xisaab bangi si aad u hesho dalabka lacagta.
Waxay bixiyaan qarsoodi. Markaad qorto jeeg shakhsiyeed, jeegaas waxa ku jira macluumaad xasaasi ah. Haddi aanad garanayn ama aanad aaminin qofka aad wax siinayso, money order waxa kaliya oo uu qof ku siinayaa magacaaga iyo lacagtaada.
Iibiyaha ayaa laga yaabaa inuu u baahdo mid. Qaar ka mid ah iibiyeyaasha ayaa dalbanaya inaad ku bixiso amarka lacagta haddii ay doorbidaan inaysan qaadan fursada ay ku aqbaleen jeeg shakhsiyeed.
Waxay ku habboon yihiin inay lacag u diraan dibadda. Haddii aad u baahan tahay inaad lacag u dirto dibadda, dalabka lacagta waa hab nabdoon oo aan qaali ahayn oo sidaas lagu sameeyo. Qaatahu waxa uu si sahal ah ugu badali karaa dalabka lacag dalbashada lacagta maxaliga ah, iyo USPS money orders aad ayaa looga tixgaliyaa wadamo badan oo aduunka ah.
Iibsadayaasha, money orders waa hab nabdoon oo wax lagu bixin karo. Waxaad boostada ku soo diri kartaa dukumeenti aad la socon karto oo uu ku cadaadin karo kaliya qaataha loogu talagalay. Marka la barbar dhigo jeegaga, dalabaadka lacagta waxay kaa caawinayaan inaad xafiddo macluumaadka qaarkood, sida lambarkaaga koontada bangigaaga. Waxay kaloo faa'iido u leeyihiin wax kala beddelashada aan oggolayn in jeeg lagu bixiyo.
Qaar ka mid ah soosaarayaasha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku bixiso dalabka lacag bixinta kaarka deynta laakiin waxaa laga yaabaa inay ku sifeeyaan wax kala iibsiga inay tahay horu marin lacageed oo waxay kugu soo dalacayaan khidmadaha hore-cashka iyo dulsaarka sare.
XIDHIIDHKA: 10-ka Lacag dhigaal ee Ururada Daynta ugu Fiican 2022
Waxa laga yaabaa inay kaa dalbadaan inaad bixiso lacag laakiin waa inaad awood u leedahay inaad gasho bangiga maxaliga ah ama laanta ururka amaahda oo aad codsato dalab lacageed. Waa inaadan u baahnayn inaad xisaab ku yeelato bangiga ama ururka daynta si aad tan u samayso.
Western Union iyo MoneyGram labaduba waa adeeg bixiyayaasha dhaqaalaha. Labaduba waxay leeyihiin goobo tafaariiqeed waxayna ku siin karaan dalabaadka lacagta iyo sidoo kale siyaabo kale oo aad lacag ugu guurto. Waxaad ka heli kartaa meel kuu dhow adiga oo isticmaalaya goobeeyaha shabakadaha Western Union iyo MoneyGram.
U madax xafiis kasta oo boosto ah oo wata lacagta caddaanka ah, kaarka deynta, ama jeega socdaalka. Ma awoodi doontid inaad ku bixiso dalabka lacagta adigoo ku dalacaaya kaarka deynta. Waxaad bixin doontaa kharashka socodsiinta $1.45 qaddarka u dhexeeya 1 senti ilaa $500 iyo $1.95 qaddarka u dhexeeya $500.01 ilaa $1,000.
Inta badan 7-Eleven goobahoodu waxay ku yaalaan Helitaanka US khidmadahana way ku kala duwan yihiin meelaha. Khidmadodu waxay ku kala duwan yihiin goobta, oo u dhaxaysa 1% ilaa 3% qiimaha dalbashada lacagta
CVS waxa ay leedahay oo ay ka shaqeysaa kumaankun dukaanno daroogo ah oo dhan US Cash waa qaabka kaliya ee lacag bixinta laga aqbalo dalabka lacageed ee CVS, waana in aad haysataa aqoonsi sax ah.
In kasta oo Kmart ay xidhidhisay bakhaarradii sannadkii la soo dhaafay, haddana waxa ay leedahay oo ay ka shaqeysaa qaar ka mid ah dukaamada leben-iyo-hoobiye. Haddii ay jirto meel Kmart kuu dhow, marka hore wac si aad u aragto in dukaanku bixin doono dalab lacageed. Waxaad ku bixin kartaa dalabka lacagta adigoo isticmaalaya kaash ama kaarka bangiga, iyada oo aan wax lacag ah lagu kordhin isticmaalka kaarka deynta.
Iyadoo ku dhawaad ​​3,000 oo dukaamo waaweyn ah ay ku baahsan yihiin Mareykanka, Kroger dad badan ayaa heli kara - laakiin dukaan kasta oo Kroger ah ma soo saari doono dalabaadka lacagta. Kuwa sameeya, khidmadaha iyo xadka ayaa ku kala duwan goobta. Waxa kale oo aad ku dalacsan kartaa dalabaadka lacagta goobaha Kroger ee ka qaybqaadanaya, laakiin kharash ayaa lagu dabaqi doonaa.
Ikhtiyaarka maxalli ah ee gobolada qaarkood sida Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, iyo Wisconsin. Meijer wuxuu bixin doonaa, laakiin ma aha lacag caddaan ah, dalabaadka lacagta. Waxaad ku bixin kartaa dalabka lacag bixinta kaadhka debitka oo aan wax lacag ah lahayn.
Publix waxay ka shaqeysaa ku dhawaad ​​1,300 goobood oo ku kala yaala todobada gobol: Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee, iyo Virginia. Waxay iibisaa, laakiin ma samayn doonto lacag caddaan ah, dalabaadka lacagaha dhammaan bakhaaradeeda marka laga reebo goobaheeda Suuqa GreenWise.
Walmart waxay ku leedahay meelo Maraykanka oo dhan ah Waxaad Walmart ku bixin kartaa lacag kaash ama debit ah. Waxa jira khidmad ugu badan oo ah $1, iyada oo aan lahayn kharash dheeraad ah oo lagu bixiyo kaarka deynta.
XIDHIIDHKA: 15 Xidigiyayaasheeda Ugu Fiican Delhi | 2022 Faallooyinka ugu Fiican
Waxa kale oo aad ku shubi kartaa MoneyGram dalabaadka lacagta haddii laga soo iibsaday Walmart. Waxay leedahay xad ah $1,000 oo leh ugu badnaan $1,000 maalintii
Hubi kaashka, xawilaadda lacagta, iyo bakhaarrada amaahda maalmeedka
Haddii aad isticmaasho bangigaaga, waxaad lacagta ka wareejin kartaa koontada jeeggaga ama kaydka. Dukaanle ahaan, waxaad caadi ahaan ku bixisaa dalabka lacag caddaan ah ama kaarka deynta. Ku habboonaanta iyo kharashka ayaa laga yaabaa inay kuu sheegaan meesha aad ka iibsanayso. Qiimaha ayaa caadi ahaan ugu hooseeya Xafiiska Boosta, dukaamada waaweyn, iyo dukaamada ku habboon — qiyaastii $1 dalabkiiba. Bangiyada iyo ururada deymaha ayaa laga yaabaa inay dalacaan $5 ilaa $10.2
Haddii aad hesho dalabka lacagta, waxa aad u caddaan kartaa ama u dhigi kartaa sida jeeg oo kale. Si la mid ah jeegga, waxaad saxiixday dambe ee dalabka lacagta.
Way fiicantahay in lacag laga soo dalbado isla shirkad ama hay'ad laga soo iibsaday, sida Western Union, MoneyGram miiska, ama bangiga ama ururka deynta ee soo saaray.
Haddii aanad hadda u baahnayn lacag caddaan ah, waxa fiican inaad lacagta ku shubto akoon bangi sida ugu dhakhsaha badan. Way fududahay in la meel dhigo, lumiyo, ama la iloobo in muddo ah.
Soo saare kastaa wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan si loo buuxiyo dalabka lacagta. Si kastaba ha ahaatee, nidaamku wuxuu la mid yahay qorista jeeg. Waxaad u baahan doontaa inaad ogaato magaca lacag-bixiyuhu, qaddarka lacag-bixinta, ciwaanka lacag-bixiyuhu, iyo tafaasiil kasta oo kale oo khuseeya, sida lambarka koontada.
Waxa kale oo lagaa doonayaa inaad keento qaab lacag bixin oo sax ah si aad u iibsato dalabka lacagta — lacag caddaan ah, jeegaga safarka, iyo kaadhadhka debit-ka dhamaantood waa ay aqbalaan inta badan soosaarayaasha. Markaad iibsato dalabka lacagta, waxaad siin doontaa cadadka soo saaraha. Dukumeentiga xaashida ah ee aad helayso waxa ku jiri doona lacagtaas, markaa uma baahnid inaad buuxiso.
Si aad si sax ah u buuxiso dalabka lacagta, waxaad u baahan doontaa inaad keento macluumaadka la codsado
Name: Ku qor magaca buuxa ee qofka ama meheradda aad ku bixinayso amarka lacagta. Goobtan waxa laga yaabaa in lagu calaamadiyo "Lacag bixiye," "Lacag bixiye" ama "Lacag bixiye." Ka fogow in goobtan ay faaruq noqoto ama aad ka dhigto dalabka lacagta lagu bixiyo lacag caddaan ah, haddii kale qof kastaa wuu dayn karaa, oo waxaad halis u tahay inaad lumiso lacagta haddii dalabka lacagtu lumo ama la xado.
Address: Qaar ka mid ah dalabaadka lacagaha waxay ka kooban yihiin garoon aad ku bixisid ciwaanka boostada ee hadda haddii qaataha u baahdo inuu kaala soo xiriiro lacag bixinta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka welwelsan tahay sirtaada, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ka saarto macluumaadkan.
Faahfaahin dheeri ah: Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto macluumaad dheeri ah dalabka lacagta si lacag bixinta si sax ah loogu maareeyo. Tan waxa ku jiri kara lambarkaaga akoonkaaga, wax kala iibsiga ama faahfaahinta dalabka, ama qoraalo kasta oo kale oo ka caawin doona qaataha inuu aqoonsado sababta lacag bixinta. Goobtan waxa lagu calaamadayn karaa "Re:" ama "Memo." Haddii aysan jirin goob laga helo macluumaad dheeraad ah, ku qor dhinaca hore ee dukumeentiga.
Saxiixa: Qaar ka mid ah dalabaadka lacagaha waxay u baahan yihiin saxiix. Ka raadi goob ku calaamadsan "Saxiixa," "Iibiyaha," ama "Drawer" oo ku yaal xagga hore ee dukumeentiga. Ha saxiixin gadaasha dukumeentiga sababtoo ah tani waa meesha uu qaataha saxiixo si uu u taageero amarka lacagta.
Kadib markaad buuxiso dalabkaaga lacag, hayso rasiidh kasta, koobiyada kaarboonka, iyo dukumeentiyada kale ee aad hesho markaad iibsanayso haddii ay dhibaato ka timaado lacag bixintaada. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato dukumeentiyadan si aad u baabi'iso dalabka lacagta, waxayna ku caawin karaan marka la raadinayo ama la xaqiijinayo lacag bixinta.
FAQ Meesha laga helayo Amarka Lacag
Dalabka lacagta gurigu waxay leeyihiin kharashyo kala duwan, laga bilaabo hal dollar ka hooseeya ilaa $5, taas oo ku xidhan meesha aad ka soo gadato. Waxaad heshiis ka wanaagsan ka heli doontaa Walmart ama wakiilka xawaaladaha, oo waxaad sida caadiga ah wax badan ka bixin doontaa bangiga.
Jeegaga khasnajigu waxay la mid yihiin dalabaadka lacagta. Sidoo kale waa dukumeenti warqad ah oo la siiyay lacag-qaare gaar ah oo uu dammaanad qaaday soo saaraha. Si kastaba ha ahaatee, bangiyada iyo ururada deymaha oo kaliya ayaa bixiya jeegagga lacag-hayaha.
Dalabka lacagtu waxa uu u baahan yahay in lagu shubo ka hor 10:00 PM wakhtiga maxaliga ah iyada oo la isticmaalayo laanta ama ATM-ka si loo xisaabiyo maalinta ganacsiga. Lacagtu waxay diyaar u ahaan doontaa ka bixista maalinta ganacsiga ee soo socota, iyo jeegaga mushaharka iyo iibka lagu soo dhejiyo akoonkaaga habeenka xiga.
Jeegaga khasnajiga ayaa guud ahaan loo arkaa inay ka ammaan badan yihiin dalabaadka lacagta. Inkasta oo ay jiraan khiyaanooyin jeeg oo ku lug leh jeegagga khasnajiga ee been abuurka ah iyo dalabaadka lacagta, jeegga khasnajigu waxa uu leeyahay astaamo ammaan oo ka badan kan caadiga ah ee lacagta dalbashada.
Dalabka lacagtu ma badbaadsan yihiin? Dalabka lacagtu guud ahaan waa bedel badbaado leh oo kaash ah ama jeegag maadaama bixiyaha kaliya uu awoodi karo in uu kaash ka dhigo ama ku shubo cadadka ku daabacan dukumeentiga. Ilaa iyo inta aad haysato rasiidhkaga, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto lacag bixintaada oo aad dib u soo ceshato wixii lacag ah haddii ay lunto, la xado, ama waxyeello gaarto.
Sababtoo ah dalabaadka lacageed waa kuwo hore loo bixiyay, laguma diidi karo lacag aan ku filnayn oo laguma soo rogayo khidmadaha la socda jeegga jeegga. Ganacsiyada ama dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay aqbalaan dalabaadka lacagta laakiin ma aha jeegag shakhsiyeed sababtoo ah ma rabaan inay ku dhibaan khatarta jeeg xun.
Dalabka lacagta gudaha waligood ma dhacayaan mana ururiyaan dulsaar. Dalabka lacagta waxa lagu soo shubaa cadadka saxda ah ee dalabka. Waxaad Xafiiska Boosta lacag la'aan kagaga iibsan kartaa USPS. Waxa kale oo aad ka caddaan kartaa bangiyada iyo dukaamada qaarkood.
Haddii aad lumiso dalabka lacagta, waxaad ka joojin kartaa bixiyaha adeegga. La xidhiidh iyaga oo wata macluumaadka ku saabsan dalabkaaga lacagta oo raac habraacyadooda joojinta. Caadi ahaan waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka burinta oo aad bixiso lacag, waxaadna codsan kartaa dalabka beddelka lacagta ama lacag caddaan ah oo laguu soo celiyo.
Qaar ka mid ah hay'adaha maaliyadeed sida shirkadaha caymiska iyo shirkadaha dalaaliinta ma aqbalaan amarrada lacagta sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa hawlaha lacag-dhaqidda.
Bangiyada moobiilka waa mid aad caan u ah oo ku haboon wakhtigan, laakiin bangiyada ayaa laga yaabaa inaanay kuu ogolaan inaad isticmaasho qalabkaaga gacanta si aad u dhigto dalabaadka lacagta, inkastoo ay aqbalaan jeegag qoran. Dalabka lacagtu waa ku habboon yihiin, laakiin ka taxaddar iyaga.
10-ka Warbixinnada Daynta Xorta ah ee ugu Fiican
Sida Loo Iibsado Polkadot Coin 2022
17 Taxanaha Shabakada Wanaagsan ee Wakhtiga oo dhan | 2022
Covid19 wuxuu noo caddeeyey cidda geesiyaasha dhabta ah aysan ahayn batman, ama aargudayaasha ama superman. Dhakhaatiirta! …
Immisa ayuu ku kacayaa Xafiiska Virtual?
Isticmaalka xafiiska casriga ah wuxuu ku kici karaa wax kasta laga bilaabo $40 ilaa in ka badan $200 bishii. Inta badan adeegyada…
10ka App ee Farriimaha ugu Fiican ee iPhone 2022
IPhone-ku waa summada casriga ah ee ay soo saarto, nashqadayso, oo ay suuq geyso Apple Inc. kaas oo isticmaala moobilka Apple ee iOS-ka…
Immisa Aasaaska Dayactirka Texas?
Qiyaasaha dayactirka aasaasiga ah ee Texas aad ayey u kala duwan yihiin sababtoo ah shirkado badan oo dayactirka aasaaska ah ayaa ku tiirsan khibraddooda si ay…